Nnwom 61 NA-TWI - Banbɔ mpaebɔ - Tie me sufrɛ, O - Bible Gateway
Nnwom 60Nnwom 62
Nnwom 61 Nkwa Asem (NA-TWI)
61 Tie me sufrɛ, O Onyankopɔn; tie me mpaebɔ! 2 Abasamtu ne akyirikyiri a mifi na mede aba wo nkyɛn yi! Fa me, na fa me sie yiye 3 efisɛ, wone me gyefo, ogyefo dennen a ogyina tia m’atamfo. 4 Ma mentena wo Kronkron mu Kronkron hɔ me nkwa nna nyinaa. Ma me guankɔbea wɔ wo ntaban ase hɔ. 5 Woate me bɔhyɛ, O Onyankopɔn, na woama me nea ɛfata sɛ wode ma wɔn a wɔhyɛ wo anuonyam.